Umbhalo ngobomi bukaLouis Armstrong uza kuza kwiApple TV + | Ndisuka mac
Umbhalo ngobomi bukaLouis Armstrong uza kwiApple TV +
Inkonzo yokusasaza ividiyo ka-Apple ayenzi kuphela uthotho kunye neemovie ikakhulu, kodwa kukwakho nendawo yokubhala amaxwebhu azo zonke iintlobo kunye neenkqubo zikamabonwakude ezinje ngezo zinikezelwa nguOprah Winfrey kwaye kungekudala Jon Stewart.
Ngaphakathi kudidi lwamaxwebhu, sinakho ukuba sibe Inani elikhulu labo linxulumene nomculo kwaye ekufuneka songeze entsha. Ndiyathetha I-Black & Blus: IiBallds eziMibalabala zikaLouis ArmstrongUxwebhu olwenziwe yinkampani yemveliso yokuCinga amaXwebhu UBrian Grazer kunye noRon Howard ngokutsho U-Apple ubhengezile.
AmaXwebhu amaNqaku kunye neMvumelwano ye-Apple TV + isayinwe ngoJanuwari 2019, Iinyanga ezi-3 ngaphambi kokumiselwa ngokusesikweni kwenkonzo yokusasaza ividiyo ka-Apple, isivumelwano sokuba Yandiswa ngo-Matshi ophelileyo ngesivumelwano sokuqala, ke ngoko iApple TV + inegama lokuqala lokuba ungawamkeli okanye ungawamkeli umxholo omtsha odalwe yile nkampani yemveliso.
U-Apple uvumile uxwebhu olutsha ngobomi bukaLouis Armstrong, uxwebhu olwahlukileyo okoko iya kubaliswa ngokupheleleyo ngamagama ngokwawo umculo wejazz:
Uxwebhu lubonelela ngengcaciso eqinisekileyo ngobomi kunye nelifa le-master music njengomqali we-jazz, inkwenkwezi yokuqala ye-pop kunye nommeli wenkcubeko e-United States. Wayethandwa zizigidi zabantu kwihlabathi liphela, kodwa uhlala etyhilwa kakubi ngenxa yokuba engenzi ngokwaneleyo ukuxhasa intshukumo yamalungelo oluntu.
Ngokwenyani, ukulwela kwakhe ubulungisa kwezentlalo kwaxhokonxwa ngabantu abadumileyo kunye nokuzimisela kwakhe ukwaphula ukuthula kwimicimbi yocalucalulo kunye nokuthanda ilizwe. Ngenkxaso epheleleyo yeLouis Armstrong Educational Foundation, abenzi beefilimu banokufikelela kubuncwane obungenakubonwa ngaphambili, kubandakanya amakhulu eeyure zokurekhodwa komsindo, imifanekiso bhanyabhanya, iifoto, iidayari zobuqu, kunye nobomi be-ephemera yayo Ukusetyenziswa okukodwa kuxwebhu lokuqala olukhulu olunikezelwe ngokupheleleyo kubomi bakhe.
Okwangoku ukusuka kuApple ababhengezi iya kukhutshwa nini le vidiyo intsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Umbhalo ngobomi bukaLouis Armstrong uza kwiApple TV +
I-Redshift iqhelana ne-M1 kunye nabasebenzisi bayo "bavuthele kude" ngesantya sokunikezela